အကောင်းဆုံး Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, ရောင်းမည်သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck, Key ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck, Precision Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chuck System ကိုတူးKeyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Key ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မား Overload ကာကွယ်မှု keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
MT5-APU16 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
လျောက်ပတ် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck B12 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper
စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုချည် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား
Jacobs tapper လျောက်ပတ် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
B10 JT6 Keyless လေ့ကျင့်ခန်းအလိုအလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Chucks
အရည်အသွေးမြင့်မား APU03 keyless mini ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
ကြိတ်စက်ထဲက Tools 13mm ld အမျိုးအစားလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
MT3 MT4 ပေါင်းစည်း Key ကို-လျော့နည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
CNC 1/2 "Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
High Quality CNC 1/2 "Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
မြင့်မားသော Precision Taper-သငျ့ Keyless 16mm လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
မြင့်မားသော Precision 16mm Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 11 - 11.5 / Piece/Pieces
လျောက်ပတ် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck B12 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper 1.With Overload ကာကွယ်မှု 2.D <0.06mm M က <0.12mm P ကို <0.20mm 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT...
MT5-APU16 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck 1.Material: tool ကိုသံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck Morse taper နှင့်အတူ 3.Automatic သော့ခတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread နှင့်အတူ 4. လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT...
လျောက်ပတ် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck B12 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 1.With Overload ကာကွယ်မှု 2.D <0.06mm M က <0.12mm P ကို <0.20mm 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
Jacobs tapper လျောက်ပတ် keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အော်တိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား Taper-လျောက်ပတ် & Thread 1. Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပစ္စည်း: 45 #steel...
B10 JT6 Keyless လေ့ကျင့်ခန်းအလိုအလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Chucks 1.With Overload ကာကွယ်မှု 2.D <0.06mm M က <0.12mm P ကို <0.20mm 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား Size...
အရည်အသွေးမြင့်မား APU03 keyless mini ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck 1.With Overload ကာကွယ်မှု 2.D <0.06mm M က <0.12mm P ကို <0.20mm 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား Size...
ကြိတ်စက်ထဲက Tools 13mm ld အမျိုးအစားလေ့ကျင့်ခန်း Chuck စသည်တို့ကိုတွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းခုံတန်းလျား, လျှပ်စစ်လက်နှင့်လက်သမားစက်များတွင်အသုံးပြု ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့် inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် ER Collets, ဒါပေါ်မှာ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, နှိပ် collets,...
ဘက်ပေါင်းစုံ Keyless Chuck MT3 MT4 Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Drilling 1.Material: tool ကိုသံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck Morse taper နှင့်အတူ 3.Automatic သော့ခတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread နှင့်အတူ 4. လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်...
CNC 1/2 "Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck 1.Material: 45 သံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှု 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ,...
CNC 1/2 "Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 1.Material: 45 သံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှု 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏...
Taper-သငျ့ Keyless 16mm လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏မြင့်မားသော Precision ထုတ်လုပ်သူ 1.Material: 45 သံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှု 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏...
Taper-သငျ့ Keyless 16mm လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏မြင့်မားသော Precision ထုတ်လုပ်သူ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 1.Material: 45 သံမဏိ 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှု 3.Automatic သော့ခတ် 4.With Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread တပ်ဆင်ထား အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
တရုတ်နိုင်ငံ Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း
Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, Chuck ဒီ tool တွေနဲ့ချိတ်ဆက်, လက်ကိုင်အမျိုးအစား tool ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Clamp အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Threaded ဆက်သွယ်မှုများနှင့်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက် taper ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်။ အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အသုံးပြုအပေါ်ကျင်းပရန်နှင့် collet တင်းကျပ်ရန်သတ်မှတ်ထားလက်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ။
ကျနော်တို့နမူနာအပြောင်းအလဲနဲ့မှတွက်ဆဖို့ကျနော်တို့လုပ်နိုင်, Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck များ၏ထုတ်လုပ်မှုအထူးပြုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပြီးပြည့်စုံသောနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်လင့်!
1 မြင့်မားသောတိကျ conical အပေါက်။
ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်2shell ကို electrophoretic ဆေးသုတ်, ထိထိရောက်ရောက်ချေးတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းသောပွန်းပဲ့ခုခံနှင့်အတူလက်သည်းလက်သည်း3အထူးကိုင်တွယ်။
4 တိကျမှန်ကန်မှု, တိကျမှန်ကန်သောယုံကြည်စိတ်ချရသော, အကြမ်းခံသည်။
Precision Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
16 Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck